एनआईसी एशियाले पायाे ऋणपत्र निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति, व्याज कति ? - Arthasansar
एनआईसी एशियाले पायाे ऋणपत्र निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति, व्याज कति ?
बुधबार, २६ जेठ २०७८, १४ : ०१ मा प्रकाशित
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमति पाएकाे छ ।
बैंकले ‘८.५% एनआईसी एशिया डिबेञ्चर २०८७’ काे नाममा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न सेबाेनमा निवेदन पेश गरेकाे थियाे । सेबाेनबाट जेठ २० गते अनुमति पाएकाे हाे । जसमध्ये बैंकले सर्वसाधारणका लागि १२ लाख कित्ता र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न संघ संस्थालाई १८ लाख कित्ता बिक्री गर्नेछ ।
त्यसैगरी, बैंककाे उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।